« Aleo lavitra mikarakara ny vahoaka sahirana nefa salama ary manatsara ny fanampiana azy satria misy ny vary, ny menaka, ny siramamy sns... toy izay mitsabo ireo marary mety hitosaka raha tsy mitandrina isika », hoy ity farany.
« Tsy ampy ny fitaovana eo ampelatanantsika raha fatratra ny marary mafy mila « respirateurs ». Tsy ampy koa ny efitra sy farafara ho azy ireo, ary farany fa tsy latsa-danja, raha sanatria ka misy aza 1000 na 2000 ny « respirateurs » eo ampelatanantsika, mino marimarina aho », hoy ny Amiraly Didier Ratsiraka fa tsy ho ampy ny dokotera « réanimateurs » sy mpitsabo mpanampy. Tsy ampy torak’izany koa ny « pneumologues ».
Tsy ho zakantsika ny fijaliana izay efa hita mianjady amin’ireo firenena any ivelany na ireo matanjaka indrindra aza. Eo koa ny fijaliana sy ny tebitebin’ireo marary sy ireo havany ary ny fandavantenan’ireo mpitsabo sy mpitandro filaminana, tsy mandry andro tsy mandry alina, mikarakara ireo havantsika miady amin’ny valanaretina, hoy hatrany izy.